IYINTONI INTSINGISELO YOBUTHIXO YENGELOSI ENGUNOMBOLO 222 OKANYE 2222? - UBOMI
Iyintoni intsingiselo yobuthixo yeNgelosi enguNombolo 222 okanye 2222?
Ngaba uhlala ubona inombolo 222 okanye 2222? Mhlawumbi iingelosi zizama ukukuthumela umyalezo. Abantu abaninzi bakholelwa kwiingelosi ezikhuselayo kwaye bafumana ubulumko kunye nentuthuzelo kwimiyalezo abayifumanayo. Enye indlela ezinxibelelana ngayo iingelosi kukusebenzisa amanani ngokulandelelana kwawo. Inombolo yengelosi engu-222 ineentsingiselo ezininzi ezinokubakho, nangona zonke zenzelwe ukukunceda ufumane indlela yakho.
darrya / Getty Imifanekiso
Ingelosi inombolo 222 ibonisa isiqalo esitsha. Sonke sinokufikelela kwisixhobo esinamandla sokudala amava obomi bethu: ingqondo yethu. Ngokukhetha ukugxila kwiingcamango ezilungileyo, unokudala ubomi obahlukileyo. Inombolo ye-Angel 222 ikuxelela ukuba iingcinga zakho ezilungileyo kunye nokubonwayo sele kuza kuba yinyani. Ukuba ubuhlala kwiingcinga ezingakhiyo, inombolo 222 lubizo oluthambileyo lokutshintsha indlela ocinga ngayo. Xa ugxila kwiingcamango ezingalunganga, uqhubeka udala iimeko ezomeleza ingqondo yakho engalunganga.
Hlala unethemba kwaye uthathe inyathelo
UEzra Bailey / Getty Images
Ukubona inombolo yengelosi engu-222 okanye i-2222 inokuba sisikhumbuzo sokuphinda iziqinisekiso zakho ezilungileyo kwaye uzibonele uphila ubomi obufuna ngokwenene. Ukuba akuqinisekanga ngento oyifunayo, ungasebenzisa isiqinisekiso esilula njengokuthi, 'Ndiluthando.' Bopha amandla eengcinga zakho kwaye uthathe amanyathelo azixhasayo. Kusenokuba lula njengokufowuna okanye ukucela icebiso komnye umntu. Thatha inyathelo elincinci ukuya kwinto oyifunayo.
UJustin Paget / Getty Images
Kungathatha ixesha ukuba iingcinga zakho ezintle zidale utshintsho ebomini bakho. Unokucinga ukuba akukho nto yenzekayo kwaye uzive ufuna ukunikezela. Xa ubona inani lama-222, iingelosi ziyakukhuthaza ukuba uqhubeke. Utshintsho osebenzela kulo sele lukufutshane. Yiba nomonde kwaye uthembe ukuba izinto ziya kwenzeka ngexesha elifanelekileyo.
Tim Robberts / Getty Imifanekiso
Inombolo yengelosi engama-222 ibonisa ukuqalisa kwexesha lokwanda nokukhula. Kodwa oko kuthetha ukuthini ngokwenene? Sonke sinamathuba okwandisa kunye nokukhula, kodwa ngamanye amaxesha sibambelela kwiipateni zoloyiko kunye neengcinga ezimbi eziyeka le nkqubo. Xa uqaphela ukuba oku kwenzekile, ungakhetha ukucinga ngendlela eyahlukileyo. Ngoku usenokubona inani elingu-222. Luphawu lokuba uqhubela phambili kwaye ungena kwinqanaba elitsha lokukhula.
Thembela kwisiqu sakho sokwenyani
fcscafeine / Getty Imifanekiso
Ukwenza uninzi lwesi sigaba sitsha sokukhula kufuneka wakhe ukuthembela kwisiqu okanye umphefumlo wakho wokwenyani. Ubuyena bokwenyani bunxibelelene nomthombo wendalo iphela onokuthi uwubize ngokuba nguMdali oNgcwele, uThixo, okanye amandla endalo yonke. Unokukhetha ukuthembela kunye nokuhamba ngamandla ehlabathi, okanye ukuchasa kwaye uzame ukunyanzela izimvo zakho zeyona nto ilungileyo. Ukuhamba nokuhamba kuya kuvelisa iziphumo ezingcono kunokuba unokucinga.
Thembela kwindalo iphela
ifotostorm / Getty Images
Sakuba sithembele kubuntu bethu bokwenyani, sikulungele ke ukusebenzisana nendalo ebanzi ngokubanzi. Olunye uluvo lwenombolo engu-222 enokuthi ikhuthaze kukujonga ngaphaya kwakho kunye nokusebenzisana nabanye kubudlelwane bakho, umsebenzi wakho, okanye enye iprojekthi entsha. Qonda ukuba wena kunye nabo bonke abantu abakungqongileyo niyinxalenye enkulu. Emva koko ninokusebenza kunye ukwenza izinto ezingcono ngakumbi kunokuba ubunokwenza uwedwa.
PM Imifanekiso / Getty Imifanekiso
Ukuze siqhubele phambili, nathi kufuneka siyeke izinto ezadlulayo. Sonke siyazenza iimpazamo. Maxa wambi sinokutyhola ezo, okanye iimpazamo zabanye, ngendlela obuye batshintsha ngayo ubomi bethu. Kulapho ke kungena khona ukuxolela. Okokuqala kufuneka sizixolele, size ke siqalise ukuxolela abanye. Le inokuba yinkqubo enzima kodwa ekugqibeleni isinika inkululeko yokuqhubela phambili.
Ziphe ixesha kunye nabantu obathandayo
I-222 kunye ne-2222 inokuba ngumqondiso wokuba kufuneka sichithe ixesha elisemgangathweni kunye neqabane lethu okanye abanye abasondeleyo kuthi. Kulo lonke ubudlelwane, uyafunda kwaye uyakhula, kwaye ngamanye amaxesha iqabane lakho liyatshintsha kodwa ungaliboni okanye ulixabise. Khangela kunye nalo mntu ubalulekileyo, kwaye uqinisekise ukuba ukhona kwaye ulungele ngokwengqondo ukuphinda uqhagamshelane. Bavakalelwa njani ngokwenene? Bafuna ntoni?
Dala izulu emhlabeni
Zuki / Getty Imifanekiso
Injongo yakho enkulu kukusebenzisa izipho zakho ezizodwa ukuzisa ukukhanya emhlabeni nokudala izulu emhlabeni. Ingelosi inombolo 222 ikukhumbuza ukuba uhambelane nendalo yonke ukuze ufezekise injongo yakho. Thembela kwizakhono zakho kwaye uzisebenzise ukwenza umhlaba ube yindawo engcono.
Bulelani kwiingelosi zakho
fzant / Getty Imifanekiso
Enkosi kwiingelosi zakho kunye nezikhokelo ngomyalezo wazo wothando. Ngokuvuma amandla akho okukhokela ngokomoya, ubonisa ukuzimisela kwakho ukufunda nokwamkela imiyalezo yabo kwixa elizayo. Oku komeleza unxibelelwano lwakho, kwaye kusenokwenzeka ukuba ufumane imiyalezo yeengelosi ezininzi ukukunceda kuhambo lwakho.
Ngamafutshane, aNgaba usaqala ukungena kwi-numerology? Amanani eengelosi ayindlela enomdla yokuqikelela kunye nokucwangcisa, ekunika ingqiqo encinci malunga nekamva elinokwenzeka. Ezi seti ziphindaphindwayo zamanani - zihlala ziphindwe kathathu, njenge-222 - zinentsingiselo yokomoya evela kubukho babo ebomini bethu.Ukuba ubona ingelosi inombolo 222 ngeenxa zonke kuwe, ingelosi yakho engumgcini inokuthi ikwazise ukuba lixesha lesiqalo esitsha, ke hlala ujonge loo mathuba. Ngokufanayo, i-222 inokuba luphawu lokuba kufuneka uhlale unethemba kwaye uqhubeke - izinto ezintle ziyeza!
ngobusuku bangaphambi kwefilimu yeKrisimesi
imifanekiso yesikhokelo somoya
beze ngokungqongqo abadanisi abangamadoda
rhuqa uhlanga uk season 2 queens
braid izandiso amadoda
linini ixesha lesi-4 likaNksk maisel